Ugari neInvestment yeMalta uye Golden Visa
● Ugari nekudyara kuMalta nekudyara muzvivakwa
Best Vamiririri veCitizenship neInvestment muMalta uye Magweta e Citizenship neInvestment muMalta uye ma broker e real estate Citizenship zvirongwa muMalta zvinoshanda zvakabatana kuchengetedza kwevatengi.
Citizenship neInvestment vamiririri veMalta vanopa mabasa ekugara nekudyara muMalta, Citizenship nemapurogiramu ekudyara muMalta, Citizenship nehurongwa hwekudyara muMalta, Citizenship yechipiri nekudyara muMalta, Citizenship huviri nekudyara muMalta, ugari uye ugari nekudyara muMalta , Citizenship yekusingaperi nekudyara kuMalta, Citizenship kwenguva pfupi nekudyara muMalta, Citizenship nehurongwa hwekudyara muMalta, Citizenship nehurongwa hwekudyara muMalta, Residency nekudyara muMalta, Residency nezvirongwa zvekudyara muMalta, Residency nehurongwa hwekudyara muMalta, wechipiri Kugara nekudyara muMalta, huviri Residency nekudyara muMalta, pekugara uye ugari nekudyara muMalta, kugara uye ugari nekudyara muMalta, zvirongwa zvehupfumi zvehupfumi muMalta, Residency nehurongwa hwekudyara muMalta, Residency nezvirongwa zvekudyara muMalta, wechipiri pasipoti muMalta, yechipiri mapasipoti muMalta, yechipiri pasipoti pro gramu muMalta, mbiri kechipiri pasipoti muMalta, pekugara uye yechipiri pasipoti muMalta, yedhipatimendi repasipoti repashure muMalta, yechipiri pasipoti nekudyara muMalta, yechipiri ugari pasipoti muMalta, yechipiri pasipoti chirongwa muMalta, chechipiri pasipoti zvirongwa muMalta, goridhe visa kuMalta, mavhiza endarama muMalta, zvirongwa zvendarama zveMalta, chirongwa chendarama vhiza muMalta, yechipiri vhiza vhiza muMalta, yechipiri vhiza vhiza chirongwa muMalta, mbiri vhiza vhiza muMalta, ugari uye vhiza vhiza muMalta, kugara uye visa yegoridhe kuMalta, mugari vhiza mugari muMalta, dhiza vhiza scheme muMalta, goridhe visa zvirongwa muMalta.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Citizenship nekudyara muMalta nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muMalta ye Citizenship nekudyara: EUR 1,000,000
Nhanganyaya Malta uye Citizenship neInvestment
Zvitsuwa zveMalta zvine zviwi zvitatu zvakakosha: Malta, Gozo, neComino zvakarongedzwa chete 95 km kumaodzanyemba kweSicily uye 290 km kubva kuNorth Africa Coast.
Malta iri pakanangana neEuropean, North Africa, uye Middle East.
Mahombekombe egungwa reMalta akanaka nemahombekombe mazhinji, mapfupi, nzizi, jecha regungwa, uye zvakavhara. Zvinotora maawa maviri kusvika matatu kusvika kuMalta kuburikidza nemhepo kubva kunharaunda zhinji dzemuEurope.
Kune akateedzana uye asinga mise nzendo kuMalta kubva kuLondon, Roma, Paris, Frankfurt, Brussels, Geneva, Atene, Amsterdam, Madrid, Munich, uye Vienna, pakati pevamwe. Dzimwe ndege dzinoteedzana dzinoshandawo kubva kunopesana neNorth Africa neMiddle East.
Senyika yeEU, zvinotarisirwa neMalta zvemavisa zvinoenderana nezano reEU. Malta saizvozvo mafuremu chikamu cheSchengen dunhu. Zuva rega rega rinokurumidza rwechikepe manejimendi kune vafambi, mota, uye dzinorema mota dzinosanganisa Valletta neSicily. Mamwe manejimendi manejimendi anobatanidza Valletta neItari neNorth Africa. Malta inogona kunge iri sarudzo inokatyamadza pakuongorora kwako.
Sezvo chikamu chidiki cheEU chinotaura, pamwe ungadai usina kubata mhepo yeMalta kare. Zvisinei, usarega izvozvo zvichikuderedza. Kunze kwekunge uine hupfumi hwakadzika pasi, huwandu hwekushaikwa kwemabasa, uye imwe yemamiriro ekunze epamusoro, Malta inopa kudzidzisa kusingaite, mabasa ekurapa, uye mamiriro ekunze akachengeteka.
Tisati tarisa zvakadzama kuti zvakaita sei kugara muMalta, regai tikupei zvishoma nezve nyika. Icho chitsuwa cheRepublic muMediterranean, anga ari munhu kubva kuEuropean Union kubvira 2004, uyezve achiumba chikamu cheSchengen Area kubvira 2007.
Iine chidimbu chakaumbwa cheBritish nyika, Malta ine yakasimba inosunga neUnited Kingdom uyezve inhengo yeCommonwealth yeMarudzi.
Rudzi rune madhiri asina kuvhurika akavhurika kwaunogona kupa yako mhuri kugutsikana kwepamusoro padivi pe-rondedzero yekiriniki uye yekudzidzira system. Kutamisazve kune imwe nyika inogona kunge iri imwe yenguva yekuyedza iwe nemhuri yako, kunyanya zvine chekuita nevana. Chinhu chimwe chinogona kuita kuti kudzikisira pasi kutenderera kuve nyore kune vechidiki chikoro chakasarudzirwa ivo.
Sangano rekudzidzisa muMalta rakamisikidzwa zvakanyanya, uye chikamu chakakura chezvikoro chinotevera chirongwa cheBritain chekudzidzisa chine huwandu hwakawanda hwezvidzidzo zvekutora / kuwana kubva. Izvo zvakare zvinomanikidzwa kune vana kuti vaende kukirasi muMalta kusvika panguva yegumi nematanhatu. Makiriniki epachivande uye eruzhinji echimbichimbi aripo nhasi, akashongedzerwa neazvino hunyanzvi mubhizinesi rekiriniki, uye anotsigirwa nesangano rezvehutano rinotarisisa kwese kwese kuzvitsuwa.
Sangano reMalta rekurapa rezvehutano rakamira pakati pezvakanakisa zvishanu papasi neWorld Health Organisation. Ichitsigirwa nekuenderera mberi nekukurumidza kusimudzira, hupfumi hweMalta hunobata yakaderera nguva yekushaya basa. Hupfumi hunovimba nekutengeserana kusingazivikanwe, kugadzira (kunyanya Hardware nemishonga), uye indasitiri yekufamba. Kudzoreredza kwemari kwehupfumi hweEuropean kwakasimudza fares, indasitiri yekufamba, uye kazhinji kutaura kusimudzira. Akakosha mabhizinesi zvikamu zveMalta maEurozone, USA, neSingapore.
Kugadzirwa kwemafirimu muMalta ndeimwe indasitiri iri kusimukira, zvisinei nekukwikwidzana kwakasimba kunobva kune mamwe mafirimu muEastern Europe neNorth Africa, neMalta Film Commission ichipa rubatsiro kumatongerwo enyika kumasangano asina kujairika emafirimu ekugadzira firimu rinoonekera (Gladiator, Troy, Munich uye Count. yeMonte Cristo, Hondo Yenyika Z, pakati pevamwe, vakapfurwa muMalta mukati memaviri emakore apfuura), kushambadzira uye nhepfenyuro dzeTV. Mutero muMalta unounganidzwa zvichibva kumba uye unobhadhariswa pamari yese uye kumwe kuwedzera kwemari.
Iko kusanganiswa kweMalta yemutero sisitimu uye yakafamhamha miviri yekugadzirisa mutero musangano (zvinopfuura makumi manomwe) zvinoreva kuti, nekuronga kwakakodzera uye kuronga, vafungidziri vanogona kuita kugona kukuru kwemari vachishandisa Malta sehwaro.
Masangano akagadzwa muMalta purofiti nekushandisa kwese kuzere masisitimu sisitimu uye inodzoserwa mutero chikwereti purofiti pane mabhenefiti anopihwa kune vanoita mari.
Malta saizvozvo inopa yakaringana mutero yekugara chinzvimbo chevanhu kuburikidza nezvirongwa zvakasiyana kuti vabatsire vasina-kugara kuti vatore yavo mutero chinzvimbo munharaunda.
Zvekutanga ruzivo rwe Citizenship neInvestment yeMalta
Chishoma kudyara kwe Citizenship nekudyara muMalta
Mari yekuwedzera ye yendarama vhiza ye Malta
Citizenship nekudyara kweMalta
Kuchengetedza nguva yeU Citizenship nekudyara kweMalta
Investment Sarudzo dze Ugari nekudyara kweMalta
Nei uchienda kuCitizenship nekudyara kweMalta
Malta inyika yakanaka kwazvo. Nyika iri chikamu cheEU uye Schengen zone. Malta ine nhoroondo refu. Vagari venyika vanonakidzwa nehupenyu hwepamusoro. Mapasipoti eMalta anokupa iwe kodzero yekugara nekufamba chero munzvimbo yeEU. Maitiro ekunyorera akanaka akaomarara / Ndidzo chete nhengo dzemhuri dzepedyo dzinokodzera kuverengerwa muchikumbiro chekuva mugari weMalta.
Nhengo dzemhuri dzepedyo dzezvemari chete dzinogona kuve hunyanzvi hwechikumbiro chekuva mugari icho chichava nemari yekuwedzera. Nhengo dzemhuri dzinogona kuve mukwanyina, vana vari pasi kana pamusoro pegumi nemasere vanovimba newe, uye mubereki kana sekuru veumwe wako kana sekuru.
Citizenship Nehurongwa hwekudyara muMalta kukurudzira
Mushure mekugara kwemwedzi gumi nemaviri, unogona kunyorera kuve mugari weMalta. Izvi hazvireve kuti gumi nemaviri ekuvapo kwemuviri munyika, iwe unofanirwa kuve nemvumo yekugara chete. Iwe uchafanirwa kuchengetedza chivakwa munyika kwenguva yemakore mashanu. Iwe zvakare unofanirwa kudyara mune zvemari zvinhu izvo zvinogamuchirwa nehurumende yeMalta, uye nekupa zvipo. Ugari hweMalta hunopihwa kwehupenyu hwese uye hunogona kupfuudzwa kuvana vako.
Kuti uve mugari wemo uchafanirwa kuisa mari yeUS $ 150,000 muzvirongwa zvinogamuchirwa nehurumende. Iko kudyara kunofanirwa kuchengetwa kweashoma makore mashanu.
Unosungirwa kubhadhara mupiro weEUR 650,000 kuNational Development Fund, isingakwanise kudzoserwa.
Iwe zvakare uchafanirwa kutenga kana kubvarura chinhu muMalta kweanenge mashanu makore. Kana iwe ukafunga kuita kutenga chivakwa, uchafanirwa kutenga isingasviki EUR 5. Zvikasadaro, iwe unogona kukwereta chivakwa kweinenge EUR 350,000 pagore.
Kune zvekare mari yekuwedzera yeEUR 7,500 uye mari yehurumende inotangira kubva kuEUR 78,000. Iyo miripo inochinja shanduko zvichienderana nenhamba yevanonyorera uye zera ravo.
Mutengi kutsigira Citizenship nekudyara kweMalta
Chikwata chedu che Citizenship neInvestment Agents eMalta uye Citizenship ne Investment Lawyers yeMalta inopa vatengi uye mhuri dzavo muMalta nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuMalta, kugara nekudyara kubva kuMalta uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Isu tinopa zvinodhura Citizenship nekudyara mabasa yeMalta, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yeMalta, inokwanisika inivhesitimendi inzvimbo yekuenda kune dzimwe nyika makwikwi eMalta, inokwanisika Citizenship nevezvekudyara varairidzi veMalta, inokwanisika Citizenship nemagweta ekudyara eMalta uye inodhura yekufambisa yekufambisa kambani yeMalta
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuMalta.
Citizenship neInvestment yeMalta kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvezvivakwa muMalta nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana kudzoka kwakanaka pane kudyara muMalta, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwavakaita kwavo kweCitizenship nekudyara kweMalta. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa zvevatengesi muMalta vane yakanaka track rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka muMalta, kutora zvakanaka kudzoka.
Unoda kuziva - Malta Citizenship neInvestment
Citizenship neInvestment Gweta yeMalta ichapa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Citizenship nekudyara kuMalta. Yedu standard masevhisi e Citizenship neInvestment kuMalta inosanganisira:
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Citizenship nekudyara kweMalta kune vatengi kuti vawane Citizenship yeMalta uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Kuti isu tifambire mberi nehukama hwako nekudyara kunyorera kweMalta isu taizoda makopi akaongororwa evatengi nenhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Ugari nekudyara kunyorera kweMalta. Magweta edu akasarudzika e Citizenship nekudyara kweMalta uye goridhe visa ichabatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveCitizenship nekudyara kunyorera kweMalta kwagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvine chekuita neMalta.
Kamwe kana chikumbiro chako cheU Citizenship nekudyara kweMalta chabvumidzwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye totanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Citizenship neinvestment services muMalta kune pazasi vanotaurwa Vanhu kana mabhizinesi muMalta:
Citizenship nebasa rekudyara reMalta hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovera maoko nezvombo kubva kana kuMalta.
Citizenship nezvirongwa zvekudyara zveMalta hazvipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muMalta kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuMalta.
Citizenship nekutsvaga kwekudyara kweMalta hazvipi kupihwa kune chero zvisiri pamutemo kana mhosva zviitiko muMalta.
Citizenship nerutsigiro rwekudyara yeMalta haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muMalta.
Citizenship nebasa rekudyara reMalta haisi yemabhizinesi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine njodzi zvombo zvenyukireya kana nyukireya muMalta.
Citizenship nechirongwa chekudyara rutsigiro rweMalta haruwanikwe kune vanhu veMalta vanobata mukutengesa, kuchengetedza muMalta, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Citizenship nekudyara yeMalta haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Citizenship zvirongwa zvebasa yeMalta hadzisi dzezvitendero zvechitendero uye avo anobatsira muMalta.
Citizenship nebasa rekudyara mu Malta haina kupihwa kune vanhu vanobata mune Zvinonyadzisira muMalta.
Ugari Hwedu makurukota muMalta haitsigire bhizinesi rekutengeserana nezvinodhaka muMalta.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veMalta neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muMalta kubvumidzwa kwekunyorera Citizenship nekudyara muMalta.
Citizenship nekudyara muMalta nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa hukuru hwehukama nerutsigiro rwekudyara kuMalta kwekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muMalta.
Ichitsigirwa nehukama hwepasi rose nehunyanzvi hwekudyara uye zvinodiwa neMalta, isu tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Hedu Citizenship neinvestment services kuMalta inopa yakachipa mitengo, ine yakanakisa inokwanisika chiyero cheMalta.
Isu takatora makore echiitiko kune hunyanzvi hwehukama kuMalta inotsigira vatengi uye mhuri dzavo kuMalta.
Ruzivo rweHurumende nevekudyara kukumbira veMalta nevamiriri vepamutemo veMalta vachipa rutsigiro kune vatengi.
Pamberi pehukama hwako hweMalta uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro ichave iriko kune bhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuMalta
Isu tine ruzivo rwepasi rose mu Citizenship nekudyara kusanganisira Malta, kubatsira vatengi kubva kuzere pasirese nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Citizenship yako nekudyara kuMalta ikakundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weCitizenship neInvestment kuMalta
Kuti uverenge mutengo weCitizenship nekudyara kweMalta ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veMalta, isu tinokwanisa kupa zvirinani masevhisi nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchasanganisira, kunosanganisira, mutengo weCitizenship nehurongwa hwekudyara kweMalta uye zvimwe zvikwereti.
Ugari neInvestment muMalta uye Mamwe maSevhisi
Kunze kweCitizenship nekutsvaga kwekudyara kuMalta, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare kuMalta, iyo iwe yausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nechero vamwe varairidzi veMalta kutiita shopu-yekumira yeMalta uye nyika dze106.
Isu tinotsigira nzira yemutengi wedu kupfuura Citizenship nekudyara kweMalta nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga muMalta nekunze.
Mushure meCitizenship nekudyara ku Malta kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga bhizinesi riripo muMalta kutanga pakarepo muMalta.
Mushure meCitizenship nekudyara kuMalta, setup bhizinesi mu Malta.
Magweta e Citizenship neInvestment muMalta
Isu tinopa Citizenship yepamutemo neInvestment mhinduro dzeMalta uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuMalta, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo yeMalta ine vamiririri vevanoona nezvekupinda zvakare muMalta, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa vatengi kushandira ruzivo rweMalta ne kujekesa sarudzo dzekudyara mhinduro dzeMalta vanhu uye mhuri. Hedu Citizenship neinvestment timu yeMalta inopa yakashongedzwa mhinduro dzekubudirira kweiye Mutengi.
Simba regweta reMalta rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako ne Citizenship nevamiriri vezvekudyara muMalta. Kana iwe uri muMalta kana kuronga kushanyira Malta, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Ugari neInvestment muMalta
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweCitizenship nekudyara muMalta?
Pashoma kudyara kweCitizenship nekudyara muMalta iEUR 1,000,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo rweMalta ye Citizenship nekudyara?
Ehe, gweta redu muMalta nevamiriri muMalta vanopa rutsigiro rweCitizenship nekudyara muMalta.
Ugari neInvestment kuMalta inodhura?
Mutengo weCitizenship neInvestment kuMalta uye Citizenship nemari inodiwa mari yeMalta ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubhadharisa fizi yeCitizenship neInvestment kuMalta, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvekutsigira Citizenship neInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Citizenship nekudyara kuMalta kana investor visa kuMalta?
Ugari nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeye Citizenship nekudyara kuMalta kubva kuAsia, Citizenship nekudyara kuMalta kubva kuAfrica, Citizenship nekudyara kuMalta kubva kuEurope, Citizenship nekudyara kuMalta kubva kuSouth America, Citizenship nekudyara kuMalta kubva kuMalaysia, Citizenship nekudyara kuMalta kubva kuBangladesh, Citizenship nekudyara kuMalta kubva kuIndonesia, Citizenship nekudyara kuMalta kubva kuSri Lanka, Citizenship nekudyara kuMalta kubva kuNepal, Citizenship nekudyara kuMalta kubva kuIndia uye Citizenship nekudyara kuMalta kubva kuUAE.
Hugari hwehunyanzvi neInvestment Guidance yeMalta
Kumbira kubvunza Mahara kune Hugari hwako neInvestment kuMalta
Mazwi akakosha mu Citizenship neInvestment yeMalta